Ahlu Suno oo sheegtay in ay doonayaan in lagu wareejiyo taliyaan Dalka Soomaaliyeed – SBC
Ahlu Suno oo sheegtay in ay doonayaan in lagu wareejiyo taliyaan Dalka Soomaaliyeed
Sheekh Maxamed Xasan Oowliyo oo ka mid ah AFhayeenada Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay beesha caalamka uga dhaadhiciyaan in talalada dalka lagu wareejiyo Culumaa’udiinka Ahlu Suuna waljamaaca.
Waxa uu sheegay Owliyow in Ahlu Sunna ay tahay awooda kaliyah ee xiligaan kari karta in xaalada dalka wax ka badasho , waxa uuna sheegay in ay ka guuleeysteen Cadowga dalka ku soo duulay ee uu kala jeeday Xarakada Al Shabaab.
“Waxaan rabnaa in aan Aduun weynaha ku qancino in aan bedelno Dowldda TFG_da oo ay talada dalka qabato Ahlu Sunna Waljmaaca, Ahlu waa dad aan qabiil aahayn oo Soomaali u dhan tahay wadatana feger Diini ah kana guuleeystay Cadowga Lixaadka leh ee Dalka ku soo duulay” ayuu yiri Afhayeenka u hadlay Ahlu Sunna waljamaaca.
Afhayeenkaan ayaa hadalkaan waxa uu warbaahinta ku siiyey magaalada Nairoob, waxa uuna ka mid yahay ergada Ahlu Sunna uga qeyb gashay shirka ka socda magaalada Nairobi oo ay QM soo qaban qaabisay misana lagu tilmamay in uu yahay wada tashi.
Iyadoo sidaasi ay jirto ayaa waxa shalay isqabqabsi uu soo kala dhaxgalay ergada Ahlu Sunna uga qeybgashay shirka ka dib markii ay ka tiro bateen tiradii Qm ay ugu talagashay in ay Ahlu Sunna uga soo qeyb galaan shirka inkastoo markii dambe xal laga gaaray hadana waxaa xusid mudan in saraakiil sare oo ka tirsan Ahlu Sunna waljmaaca ay qaadhaceen shirkaasi.